Archive du 20181112
Dahalo hanafika an’Ambohimalaza Tsaho fanakorontanana saim-bahoaka…
Niteraka resabe teny anivon’ny fiarahamonina nanomboka ny zoma lasa teo ilay feo niely fa hisy andian-dahalo marobe ho avy hanafika ny tanànan’Ambohimalaza, distrikan’Antananarivo Avaradrano.
Filohan’ny CENI “Tsy nandray volabe izany izahay”
Eo anivon`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana dia nivoaka tamin`ny fahanginany ireo mpikambana manoloana ireo tsikera sy fanakianana mihatra amin`izy ireo.
CENI Madagascar Tsy manana fahefana hamono vato
Naha be resaka ny besinimaro ihany koa ny fisian`ireo biraom-pifidianana misy tsy fetezany (B.V anomalie) sy ny birao fandatsaham-bato nofoanana mihitsy (B.V annulè).
SAFIDY Miadana ny fanangonam-bato ataon`ny CENI
Mitarazoka ny fomba fiasan`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana raha ny nambaran`ny fiarahamonim-pirenena Sampana Anarahamaso ny Fifidianana Ivon`ny Demokrasia Ifarimbonana (SAFIDY).
Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana Enga anie mba ho azo antoka, hoy i Faneva Raholdina
Mbola mafana ny adihevitra mikasika ny fifidianana ho filoham-pirenena tontosa ny alarobia 7 novambra teo ary manomboka mivaly tsikelikely.
Voka-pifidianana mampiahiahy Ahiana hitarika korontana
Na miezaka mivoy sy milaza ho tsy mitanila sy tena manao ny asany ao anatin’ny mangarahara aza ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana na ny CENI, dia maro ireo toe-javatra tsapan’ny olom-pirenena ho miteraka ahiahy.
Hetsika Fanorenana Ifotony “Foano io fifidianana io !”
Mitohivakana ny fanehoan-kevitr’ireo hery politika samihafa manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
Lesoka amin’ny fifidianana Tsy mety mifarana ny lisitra
Namoaka fanambarana iombonana ihany koa ny sabotsy teo ny KMF CNOE sy Liberty 32 ary ny komisionina episcopaly - Justice et paix.
Antoko HVM Manana porofo momba ny hosoka tamin’ny fifidianana
Manaja ny tany tan-dalàna sy ny soatoavina demokratika ny antoko HVM, ary izany no niadiany nametra sy manisy arofenitra ary mangarahara ny vola ampiasaina amin’ny fampielezan-kevitra,
Nihanjahanja ny famafazana volabe Mety hosaziana Rajoelina
Nahanjahanjan’ny vondrona Eoropeanina tamin’ny tatitra nataony momba ny fifidianana natao teto Madagasikara ny 7 novambra teo ny fizaram-bola nataon’ny kandida Andry Rajoelina sy ny kandida vitsivitsy,
Vahoaka Malagasy Misy mitady hampiady hatrany
Efa hatramin’ny taona 1960 nanomezana antsika ny fahaleovantena ka hatramin’izao dia mbola misy hatrany ireo karazan’olona antsoin’ireo avara-pianarana hoe notarazoim-panjanahana ka tsy mahay afa-tsy ny mamboly fifanandrafiana eo amin’ny samy Malagasy.
Nanapa-kevitra ny hivondrona hiaraka amin’ireo mpikambana eo anivon’ny hetsika fanorenana ifotony ry zareo kandida miisa 25 nanohitra ny fifidianana feno hosoka.
Rafolisisoa UNMDH Nilamina ny fifidianana tamin’ny ankapobeny
Naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny fifidianana filoham-pirenena notontosaina teto amintsika ny 7 novambra lasa teo iny Ramatoa Rafolisisoa, filohan’ny fikambanana miaro ny
Mba mivoatra re e !
Manahoana i Jean ! Leo be aho rangahy mihaino ny feonao ao amin’ny onjampeo ao marina a ! Dia tsy misy hainao atao afa-tsy ny mampiady antsika mianakavy mihitsy ve e ?
Vahoaka Malagasy Hiaina amin`ny fampanantenana poakaty foana ?
Tsy misy tsy maniry ny fandehanan`ny fifidianana an-tsakany sy an-davany ao anatin`ny filaminana tanteraka mba hahatongavana amina filoham-pirenena vaovao lanim-bahoaka, lany amin`ny fifidianana tsy misy hala-bato, hosoka na herisetra ihany koa.
Ady lehibe voalohany Teratany Malagasy 4.587 no namoy ny ainy
11 novambra 1918-11 novambra 2018 : feno 100 taona katroka omaly ny fankalazana ny fanaovan-tsonia ny fitsaharan’ny ady lehibe voalohany tany Rethondes Compiègne tany Frantsa.
Tsaho sy honohono etsy sy eroa Efa tena diso tafahoatra
Antony iray mahatonga savorovoro sy fifamaliana any anaty fiarahamonina tamin’ity fifidianana 2018 ity ny resaka tsaho sy honohono miparitaka, na io amin’ny fanehoan-kevitry ny mpihaino amin’ny onjampeo na any anaty tambajotran-tserasera sosialy tahaka ny facebook.
Ligin’ny Rugby eto Analamanga Naato 5 minitra noho ny orana ny lalaon’i Matadore A sy XV Family
Nosokafana omaly alahady 11 novambra tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena ny taom-pilalaovana 2018-2019 ho an’ny ligin’ny rugby eto Analamanga tarihan-dRavelojaona La Pie.
ASIEF Hikarakara Jeux Corporatifs ihany koa
Taorian’ny fahombiazana azony tamin’ny fikarakarana ny hetsika nasionaly tany Toamasina tamin’ny volana septambra/oktobra 2018
Afrobasket 3x3 Lomé Togo 2018 Côte d’Ivoire lehilahy sy Mali vehivavy no tompondaka
Nikatona omaly alahady 11 novambra tany amin’ny kianja Omnisport Eyadema any Lomé Togo ny Afrobasket 2018. Voailik’i Rdc 16- 9 teo amin’ny lalao 1/4-
Fanavaozana ny fampianarana Hatsaraina ny efa teo, hisy taranja vaovao hafa
Miroso amin`ny fanatanterahana ny teti-pivoarana momba ny fanabeazana (PSE) i Madagasikara, izany hoe ny fanemorana hatrany ny tetiandro fampianarana amin`ny taona 2022 ka hanomboka ny volana martsa sy hifarana ny volana novambra. Amin`ny taona ho avy,
Antoko mpihira AMAM Nakotroka ny famaranana ny faha-50 taona nijoroany
Tontosa omaly ny famaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny fahatraran’ny antoko mpihira antsan’ny mamatonalina na AMAM ny faha-50 taonany natao tetsy amin’ny FJKM Andrainarivo fahasoavana.
Tale jeneralin'ny MAKIPLAST Mbola tsy hita popoka hatry ny omaly
SAMBO NITONDRA BOADEROZY
Tsy nisy mihitsy fandrarana nataon'ny fanjakana fa dia nalefa malalaka fotsiny ilay sambo nitondra boaderozy.
Sehatra fandraharahana Miahotra amin’ny fampiasam-bola maharitra ny maro
Tarafina amin’ny totalim-bola ampindramin’ny banky ny sehatra fandraharahana eto Madagasikara. Araka izany dia salama ny toekarena raha mizotra miakatra ny vola ampindramin’ny banky (crédit bancaire).
Fananan-tany eto Madagasikara Mbola ambany ny hetra ampidiriny
Miditra tanteraka amin’ny fanatontoloana amin’izao fotoana izao ny firenena afrikanina. Io sehatra io nefa no vao mainka mampahantra hatrany indrindra ireo firenena marefo ara-toekarena tahaka an’i Madagasikara.